Spotify bụ ihe dị egwu music n'elu ikpo okwu kere ka music niile. Nke a kediegwu e kere eke bụ n'etiti ndị ọkacha mmasị nke music ndị hụrụ ndị chọrọ ka ntị music n'ebe ọ bụla n'oge ọ bụla. Ọrụ nwere ike inweta ohere ka niile ọhụrụ music egwu na-eso artists ha na-amasị. Dị nnọọ banye na-aka ahụ Spotify netwọk na i nwere ike ịbụ akụkụ nke a ntụrụndụ ụwa. Ọrụ ike denye aha na dị iche iche ọwa na-anọ emelitere ka ọhụrụ ntọhapụ, ịkọrọ ha ọkacha mmasị, na-eso ndị enyi ha 'listi ọkpụkpọ na ike ha. Na-ege ntị music aghọwo a dị iche iche na ahụmahụ na mwepụta nke Spotify. Ọrụ ugbu a nwere ike inweta ohere ka ọhụrụ tracks nnọọ mfe na àgwà nke music bụ nnọọ amamiihe.
Gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ike iji Spotify n'otu ntabi ọ bụla na ngwaọrụ? Ọrụ na-mgbe na-achọ ụzọ iji mee ka ha ohere ka ọrụ ha na-eji. Ya mere, otu dị otú ahụ ga-ekwe omume n'ụzọ bụ Spotify obere mkpanaaka. Ugbu a kama nke wụnye Spotify na usoro nke ngwaọrụ ị na-eji, ọ ga-abụ gị PC, laptọọpụ, iPad, mbadamba, Phone, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ electronic ị pụrụ nanị iji nke a mma iji Spotify.
Part 1.How ka Spotify obere?
Part 2.Where na otú ibudata Spotify obere?
1.How ka Spotify obere?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ime ka Spotify obere, ebe a bụ ihe na ị ga-neeed ime. Ezie na nzọụkwụ na-ewe oge, ị pụrụ ijide n'aka na ị ga-enweta nri results na njedebe. The ezi ihe bụ na ọ bụ naanị otu oge usoro.
1. Wụnye portableapp software jidesie gị flash mbanye. Dị na http://portableapps.com/
2. Download Spotify ngwa dị na https://www.spotify.com/us/download/windows/
3. Mgbe echichi ị ga-ahụ ndị na-esonụ faịlụ gị ndekọ
C: \_ User \_\_ AppData \_ agagharị \_ Spotify
C: \_ User \_\_ AppData \_ Obodo \_ Spotify
4. Mepee ndekọ na ịnyagharịa echichi faịlụ na idetuo nchekwa nwere faịlụ
5. Mepee mbanye ndekọ na-aga portableapp na nchekwa ma Tapawa Spotify nchekwa.
6. Nwee Ume arụnyere ngwa ndepụta na ị ga-ahụ na Spotify launcher.exe faịlụ na ndepụta.
Ozugbo ị eso ndị a ị nwere ike ịmepụta a obere mbanye ma na-eso Spotify na ndị enyi gị, na wụnye ya na ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ.
Wụnye Spotify na-enwe music, ihe niile ị na-amasị, n'ụzọ ọ bụla ị na-amasị ma ọ bụ n'ebe ọ bụla n'ihi na Spotify bụ nnọọ a USB achụpụkwa ojiji.
2.Where na otú ibudata Spotify obere?
Ị nwere ike ịchọta Spotify obere na-esonụ njikọ:
Download na wụnye software dị ka kwa gị usoro nkọwa.
Were ya na ị na-eleta a enyi unu na-achọkwa na-ege ntị gị playlist on Spotify ma ọ bụghị na-ada tinyere ekwentị gị, ọ dịghịkwa enyi gị Spotify arụnyere na ya PC. Gịnị ka ị pụrụ ime?
Gịnị ma ọ bụrụ na i nwere ike na-agba ọsọ Spotify ngwa na na ya PC na-enweghị n'ezie nbudata ya na mgbe ị na wụnye ya maka music. Na Spotify Portable ị pụrụ wụnye Mbido on a USB ma ọ bụ flash mbanye na dị nnọọ ngwa mgbakwunye mgbe ị kwesịrị.
Nzọụkwụ 1: Ka ịmepụta USB mbanye nanị wụnye Spotify obere faịlụ na-mbanye. Ị ga-ahụ ndị na-esonụ faịlụ na ngwaọrụ gị
C: \_ Mmemme faịlụ \_ Spotify "Spotify.exe" na "Uninstall.exe"
Detuo ndị a faịlụ ka flash Drive
Ugbu a ikwunye na mbanye n'ime ọzọ usoro.
Mepee mbanye ndekọ na-agba ọsọ ahụ Spotify.exe faịlụ site Spotify nchekwa.
na .exe faịlụ ga na-agba ọsọ na-echichi na ngwaọrụ ọzọ na Spotify ngwa emepe.
Nbanye na akaụntụ gị na-enwe playlist.
E nwere mmachi ịchịkwa omume a, n'ihi na ọ bụghị iwu ịkọrọ a ngwa-enweghị authenticated akaụntụ. Unu ga-edebe ndekọ ma na-enwe anya tupu ewere mkpebi ọ bụla ma ọ bụ na-ekere òkè software na netwọk ọ bụla.
Ọ na-atụ aro iji Spotify obere maka ojiji nkeonwe nanị na ojiji ọ bụla ọzọ ike-atụle n'uzo na ezighi ezi nwere ike ime ka nsogbu n'ọnọdụ ụfọdụ. Ebe ọ bụ na Spotify adịghị ma e ulo oru n'ógbè ụfọdụ na-ekere òkè nke a pụrụ-atụle ka a cybercrime.
> Resource> Spotify> Atụmatụ maka Spotify Portable